Bitcoin डेबिट कार्ड तुलना 2018 - Bitcoin Credit Card
चोटी Bitcoin डेबिट कार्ड – एक गुप्त मुद्रा कार्ड तुलना
Bitcoin इन्टरनेट को पैसा छ – र एक Bitcoin क्रेडिट कार्ड, तपाईं कहीं विश्वव्यापी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ क्रेडिट- वा डेबिट कार्ड आफ्नो रुचि को गुप्त मुद्रा संग स्वीकृत छन्. सँगै एक Bitcoin वालेटमा, तपाईँले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ 95% सबै सेवाहरूको सामान्य बैंक पनि गर्न प्रदान गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो पैसा ब्यालेन्स र अरू कसैले भन्दा कुल नियन्त्रण छ कि ठूलो फरक संग. यो वित्त भविष्य छ. स्वतन्त्रताको आनन्द. तपाईं एक Bitcoin कार्ड खरीद बारे प्रश्न छ भने, बनाउन जाँच गर्न निश्चित हाम्रो “कसरी चयन गर्न” पुस्तिका खelow.
Spectrocoin Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ समावेश संसारभरिका सबै देशहरूमा
+ अनुप्रयोगहरू पनि विन्डोज मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध
+ कम्पनी कार्ड उपलब्ध छ
– महंगा ढुवानी
– घोटाला रिपोर्ट र उजुरी
– वेबसाइट जानकारी छुटेको
अज्ञात कार्ड: हो
प्लास्टिक कार्ड: हो
भर्चुअल कार्ड: हो
कार्ड मूल्य: प्लास्टिक $9.00/€ 8.00 / £ 6.00 – भर्चुअल $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
मुद्राहरू: अमेरिकी डलर, युरो, GBP
विदेशी कारोबार शुल्क: 3%
शुल्क लोड: मुक्त
Cryptopay Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ तीन प्रमुख मुद्राहरू (युरो, GBP, अमेरिकी डलर) सबै अधिकार छन्
+ निःशुल्क ढुवानी विश्व-विस्तृत
+ वेबसाइट राम्रो तरिकाले डिजाइन र प्रयोग गर्न सजिलो
– यूएस नागरिकहरु लागि मात्र
– उच्च मूल्यहरु
– विदेशी कारोबार शुल्क
कार्ड मूल्य: प्लास्टिक 15 € / £ / $ – भर्चुअल 2.50 € / £ / $
मुद्राहरू: युरो, GBP, अमेरिकी डलर
शुल्क लोड: 1%
WageCan Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ संयुक्त राज्य अमेरिका सहित धेरै देशहरूमा लागि उपलब्ध
+ संग बलियो प्राविधिक पृष्ठभूमि संस्थापक
+ USD मा उपलब्ध, युरो, GBP
– सूचना वेबसाइटमा फेला पार्न गाह्रो छ
– सस्ती कार्ड स्टक बाहिर छ
अज्ञात कार्ड: कुनै
कार्ड मूल्य: बाट 0.025 BTC
AdvCash Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ कुनै मासिक मर्मतका शुल्क
+ उपलब्ध मुद्राको रूपमा RUB
+ स्विफ्ट / SEPA स्थानान्तरण मुक्त शीर्ष अप, स्थानान्तरण लागि समतल दर
– कुनै अनुप्रयोगहरू उपलब्ध
– मात्र यूएस देश समर्थित
– स्वामित्व संरचना वा अधिकारी कुनै जानकारी
– पनि प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि खरिद दैनिक सीमा
कार्ड मूल्य: प्लास्टिक $/€ 4.99 (14.99 पछि7दिन) – भर्चुअल 1 + 0.99 $/€ कोष
मुद्राहरू: युरो, GBP, अमेरिकी डलर, RUB
विदेशी कारोबार शुल्क: 2.95%
शुल्क लोड: $/€ 0.99 प्रति कारोबार
CoinsBank Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ वालेट सबै-मा-एक गुप्त प्रदायक, विनिमय र Bitcoin डेबिट कार्ड
+ छेउमा प्रमुख फिएट मुद्राहरू USD, युरो, GBP, कार्ड RUB मा उपलब्ध छ, CHF, AUD, धेरै JPY मुद्राहरू र पनि खाता litecoin सक्षम
+ प्रमाणिकरण स्तर मा आधारित धेरै कार्ड सम्भावनाहरू
– जटिल र पारदर्शी छैन स्वामित्व र दृढ संरचना
– निःशुल्क ढुवानी मात्र प्रिमियम प्रयोगकर्ता लागि उपलब्ध छ
– उच्च शुल्क POS र एटीएम मा लागू
कार्ड मूल्य: प्लास्टिक बाट $14.95 – भर्चुअल बाट $2.95
मुद्राहरू: युरो, GBP, अमेरिकी डलर, RUB, CHF, AUD
विदेशी कारोबार शुल्क: बाट 2.5%
Uquid Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ USD मा उपलब्ध, युरो, GBP र 40 Bitcoin छेउमा फरक altcoins
+ असीमित आजीवन खरिद र एटीएम withdrawals
+ धेरै लोड विकल्पहरू
– गरिब अंग्रेजी आफ्नो वेबसाइटमा प्रयोग गरिन्छ
– अमेरिकी बासिन्दा लागि उपलब्ध छैन
– ताजा कम्पनी
कार्ड मूल्य: plasitc $1 – भर्चुअल $1
मुद्राहरू: अमेरिकी डलर, युरो, GBP र 40 विभिन्न altcoins
शुल्क लोड: 1.5% – 5%
Xapo Bitcoin कार्ड – फाइदा र बेफाइदा
+ सुरक्षाको उच्च स्तर
+ बलियो राजधानी संरचना
+ माथि कुनै अप शुल्क
– अप्रमाणित प्रयोगकर्ता अनलाइन र POS कारोबारका लागि सीमा
– अमेरिकी नागरिक बहिष्कृत
भर्चुअल कार्ड: कुनै
मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो Bitcoin कार्ड के छ?
सही Bitcoin कार्ड प्रदायक कसरी चयन गर्न?
त्यहाँ धेरै कम्पनीहरु र सुरु अप को cryptocurrencies थप र थप लोकप्रियता प्राप्त गर्दै छन् आजकल Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदान गर्दै.
त्यहाँ एक केहिपनि-हुन Bitcoin डेबिट कार्डवाहक गर्दा सबै भन्दा राम्रो प्रदायकको लागि खोजी खोज्न आवश्यक केही अंक हो. कार्ड प्रदायकहरू आफ्नो साइटमा यो जानकारी को सबै भन्दा खुलासा, त्यसैले यो सबै राम्ररी मार्फत यसलाई पढ्न बस लिन्छ. कार्ड जारीकर्ता कम्पनी को पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त.
Bitcoin र सार्वजनिक blockchain लेजर पछि सम्पूर्ण विचार अविश्वास छ. त्यसैले Bitcoin डेबिट cardholders अन्य उद्योगहरूमा ग्राहकहरु भन्दा सामान्यतया थप शंकास्पद ग्राहकहरु छन्. यसैले प्रदायकहरू तिनीहरूले सही प्रदान आफ्नो भविष्य ग्राहकहरु विश्वस्त हुनुपर्छ, भरोसायोग्य सेवाहरू.
सामान्यतया प्रदायकहरू बस कार्ड भन्दा धेरै सेवाहरू प्रदान. सबैलाई एक वालेट छ, तर उदाहरणका लागि Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo सबै आफ्नो वेभसाइटमा मार्फत प्रत्यक्ष Bitcoin खरिद सक्षम आफ्नै Bitcoin आदानप्रदान चलाउन. अन्यथा प्रयोगकर्ता सम्बन्धित Bitcoin डेबिट कार्ड तिनीहरूलाई लोड अघि cryptocurrencies अधिकार छ.
AdvCash Bitcoin डेबिट कार्ड तीन USD जस्तै प्रमुख फिएट मुद्राहरू छ, EUR र GBP सबै प्रदायकहरू स्वीकृत छन्. RUB को निस्कने भन्दा साधारण मुद्रा छ, रूसी प्रयोगकर्ता डेबिट कार्ड जहाँ खाता RUB मा नामकरण छन् Bitcoin AdvCash आदेश सक्छ.
प्लास्टिक र भर्चुअल कार्ड बजार मा हो. प्लास्टिक कार्ड एटीएम withdrawals र अनलाइन खरिद दुवै लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, भर्चुअल कार्ड मात्र अनलाइन प्रयोग गर्न सकिन्छ. अप प्रदायक प्लास्टिक कार्ड वा मात्र एक भर्चुअल विकल्प उपलब्ध छ मुद्दों कि हस्ताक्षर गर्नु अघि यो मूल्य जाँच.
धेरै Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदायक मा, प्रयोगकर्ता पनि व्यक्तिगत पहिचान प्रमाणिकरण बिना सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छ, केही लागू गरिएको limites संग हुनत. यी सीमा एक दैनिक समावेश, नगद withdrawals वा POS खरिद मा मासिक र जीवनकालमा सीमा. अन्यथा प्रमाणिकरण प्रक्रिया जो विगत देखि एक उपयोगिता बिल हुन सक्छ राष्ट्रिय आईडी कार्ड को एक रूप मा पहिचान को एक प्रमाण र निवास एक प्रमाण पेश गरेको छ3यस अवस्थामा अधिकांश मा महिना. प्रमाणिकरण लागि आवश्यक समय धेरै भिन्न हुन सक्छन्, घण्टा जोडी बाट पनि गर्न 10 दिन.
Bitcoin डेबिट कार्ड, जो चयन गर्न?
कारण संयुक्त राज्य अमेरिका मा नियमहरु र विधान मुद्दा प्रयोगकर्तालाई सेवाहरूबाट बहिष्कृत छन्, जो अमेरिकी नागरिक सीमित सेवा प्रदान गर्दछ CoinsBank मा बाहेक.
प्लास्टिक कार्ड मूल्यहरु को ढुवानी अन्य शुल्क मा निर्माण गरिएको छ, त्यसैले सामान्य ढुवानी सामान्यतया निःशुल्क छ, बारेमा प्रदायकहरू शुल्क 45-70 तीब्रता वितरण विकल्प लागि USD.
को प्रदायकहरू अधिकांश निश्चित प्रयोगकर्ता स्मार्टफोन देखि आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण गर्न उपलब्ध स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू छ. सामान्यतया iOS र Androids आवेदन प्रदान गरिन्छ, तर Windows फोन प्रयोगकर्ता थप खोजी गर्न आवश्यक, यो केवल Spectrocoin ग्राहकहरु लागि उपलब्ध छ रूपमा.
कार्ड मूल्य निर्धारण र कारोबार शुल्कहरू
प्रारम्भिक कार्ड मुद्दा शुल्क देखि लिएर छन्5गर्न USD 20 को एक औसत संग USD 10 अमेरिकी डलर. केही मात्र भर्चुअल कार्ड प्रदान, तर मात्र लागत 0.5 अमेरिकी डलर.
केही प्रदायकहरू कार्ड संग निष्क्रिय हुनुको मा दण्डित छैन तर धेरै निष्क्रिय हुनुको लागि अतिरिक्त शुल्क. निष्क्रिय प्रयोगकर्ता कार्ड संग दुई वर्ष मा एक पटक पनि transacting गर्ने छैन हुन्छन्.
ग्राहकहरु तार स्थानान्तरण वा वरिपरि शुल्क लागि SEPA स्थानान्तरण संग कार्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ 0.5%-1%. केही प्रदायकहरू समतल दर लागू, त्यसैले ग्राहकहरु डेबिट कार्ड गर्न वालेट खाता बाट हस्तान्तरण धन को संख्या र रकम ध्यान गर्नुपर्छ. त्यहाँ लोड र यस्तो Skrill रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी प्रदायकहरू संग माल सामान उतार्नु विकल्प छ, Neteller वा PayPal. केही Bitcoin डेबिट कार्ड, तर मूल्य निर्धारण तार स्थानान्तरण भन्दा उच्च छ, हुन सक्छ 1% गर्न 5% प्रति लेनदेन.
प्रयोगकर्ता कार्ड संग transacting छ जब Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदायकहरू Profiting छन्. अनलाइन खरिद सामान्यतया मुक्त छन् हुनत, तर केही May पनि कि मा शुल्क शुल्क. एटीएम सधैं अर्कोतर्फ आरोप लगाएको छ. घरेलू नगद withdrawals वरिपरि छ 2-3 अमेरिकी डलर, अन्तर्राष्ट्रिय withdrawals छन् 3-4 अमेरिकी डलर, यो समतल दर प्रतिशतको तुलनामा लागू गरिन्छ सम्भव पनि छ. खरीद वा निकासी मुद्रा खाता पूर्वनिर्धारित मुद्रा भन्दा फरक छ भने सबै प्रदायकहरू अतिरिक्त मुद्रा विनिमय दर चार्ज 3%.
ग्राहक प्रतिक्रिया र प्रयोगकर्ता अनुभव
राम्रो सेवा राम्रो अवतरण पृष्ठ संग सुरु. के सेवा हो र कति यो लागत गर्छ यो स्पष्ट हुनुपर्छ. ग्राहकहरु प्रदान सेवाहरू बारे सान्दर्भिक जानकारी पाउन वेबसाइट प्रयोग. स्पष्ट मेनु संरचना र सोधिने प्रश्न छेउमा; प्रदायकहरू यो भित्र खोज कार्यक्षमता समावेश गर्नुपर्छ. ग्राहक सन्तुष्टि अत्यधिक भएको Bitcoin डेबिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा प्रदान समर्थन आधारमा छ, यस्तो टिकट सिस्टम रूपमा, हटलाइन लाइभ च्याट.
त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू एक Bitcoin कार्ड प्रदायक यसको ग्राहकको लागि प्रस्ताव हो. सबै भन्दा राम्रो Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदायक विशिष्ट प्रयोगकर्ताको आवश्यकता मा निर्भर छ.